Microsoft OneDrive hadda waxay u shaqeysaa asal ahaan M1 Macs | waxaan ka imid mac
Microsoft OneDrive hadda waxay u shaqeysaa asal ahaan M1 Macs
Manuel Alonso | 13/01/2022 18:29 | Barnaamijyo kale oo loogu talagalay Mac
mid ka dib sug bil Tan iyo markii la sii daayay nooca beta ee OneDrive ee Macs ee leh M1, waxaan horay u haysanay codsiga si buuxda u heli karo isticmaaleyaasha. Microsoft waxa ay oofisay ballan qaadkeedii oo waxa ay ku cusboonaysiisay OneDrive iyada oo wadata horumarro taxane ah oo loogu talagalay Mac laakiin sidoo kale iPhone iyo iPad. Laakin Macs gaar ahaan waxay helaan horumar weyn marka la eego khibradda isticmaale iyo xasilloonida. Waxa wanaagsan ayaa ah in iOS uu helo helitaan wanaagsan. Sida ay yiraahdaan Win-Win.
Mac-ka cusub ee OneDrive waxa uu bixiyaa khibrad isticmaale oo ka wanaagsan, la jaanqaadka abka oo la wanaajiyey, waana ka ammaan badan yahay oo isticmaale-saaxiibtinimo ka badan noocyadii hore. Shirkaddu waxay u haajirtay OneDrive oo ay u haajirtay shirkadda Apple ee faylalka bixiya, taas oo macnaheedu yahay adeegga kaydinta khadka ee Microsoft 365 si aad u wanaagsan ayay u shaqeysaa waxayna bixisaa sifooyin badan.
waayo-aragnimada cusub Faylasha Istaagsan Macs ku shaqeeya macOS 12.1 ama wixii ka dambeeya, waaba xaqiiqo. Tignoolajiyada cusub ee ku salaysan aaladda Fayl-bixiyaha ee Apple ayaa si aad ah ugu wanagsan nidaamka hawlgalka marka la barbar dhigo nooca koowaad. Tani waxay ka dhigan tahay khibrad isticmaale oo ka wanaagsan, ku habboonaanta abka ka wanaagsan, iyo isku halaynta wanaagsan. Laakiin sidoo kale waxay u ogolaataa Microsoft inay bixiso astaamo cusub, sida Dhaqdhaqaaqa Folderka la yaqaan.
Khibradda cusub ee Baahida Faylasha waxay u baahan tahay macOS 12.1 ama wixii ka dambeeya. Noocani wuxuu noqon doonaa nooca ugu dambeeyay ee la taageeray. Tani waxay ka dhigan tahay in aaladaha ay si toos ah ugu guuri doonaan faylalka cusub ee Baahida isla marka ay helaan cusboonaysiinta macOS.
Wax yar ayaanu aragnaa sida ay codsiyadu u gaadhayaan waafaqsanaanta asalka ah ee soo-saareyaasha cusub ee Apple. Wax aad u muhiim ah si marka ay lagu fuliyo sida ugu dhaqsaha badan iyo kharashaadka tamarta ugu yar, si loo gaaro hawlkarnimo iyo waxtar weyn. Maanta waxaan haynaa laba codsi oo horeba u socon kara, DropBox iyo OneDrive.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Barnaamijyo kale oo loogu talagalay Mac » Microsoft OneDrive hadda waxay u shaqeysaa asal ahaan M1 Macs
TSMC waxay samaynaysaa hanti aad u wanaagsan Apple
Ka faa'iidayso wax-soosaarka Apple ee ardayda kulliyadaha